Ronga zviitiko | Shanyira Hultsfred
Iwe une zano here?
Iwe unofarira kuronga chiitiko?
Kana iwe unoda rubatsiro kuvandudza iripo?
Zadza "kutanga gumi nerimwe" uye tumira. Pano, mazano anova echokwadi!
Iwe unogona kuonwa uye unonzwika muHultsfred!
Ronga zviitiko muHultsfred maseru. Tsika yakasimba yekuronga zviitiko yakavaka netiweki yakasimba ine kugona kunoshamisa. Izvi zvinorevawo nzira pfupi dzekuronga zvinhu munzvimbo dzakasiyana dzinodiwa pachiitiko.
Hultsfred idunhu diki diki, zvakaringana maererano nehuwandu hwevanhu, asi huwandu hwezviitiko uye nhandare dzekuitira zviitiko pazhinji kwazvo. Semuenzaniso, gore rega rega zviitiko zvemimhanzi zana nemakumi mashanu zvakarongedzwa, kune vazhinji vanofarira vanoshanda zvinoenderana nemota, haishande, inoshanda zvakadaro. Iwe unofarira kuronga zviitiko here kana kuti unoda rubatsiro kuvandudza iripo? Kutanga nekuzadza iyo "yekutanga gumi nerimwe" nemibvunzo gumi neimwe yakapusa kuti upindure, iyo yaunotumira kune iro chiitiko cheboka riri pasi petsika uye kutandara manejimendi.
Zadza "kutanga gumi nerimwe"
Mienzaniso yezviitiko mukati
dingindira Music & Tsika, mota uye Mitambo & Hutano
Kune zvimwe zviitiko, tarisa visithultsfred's chiitiko karenda
Art & Tsika Dzose
Tarakita Simba Sangana